Magaca ninkii ku taliyey in la faago qabriga Rasuulka & afar isku day oo horay u fashilmay (Warbixin) – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Magaca ninkii ku taliyey in la faago qabriga Rasuulka & afar isku day oo horay u fashilmay (Warbixin)
A warsame 11 September 2014 6 October 2014
Bilowgii bishaan September 2014, wargeysyada kazoo baxa dalka Britain ee kala ah: The Independent, Daily Mail iyo The Gardian ayaa faafiyey warar sheegaya in dowladda Sacuudi Carabiya qorsheyneyso iney faagto qabriga barakeysan ee Rasuulkeena Sallallaahu Caleyhi Wasallama, kana rarto halka uu ku saasnaa ee magaalada Madiina Al-munawara.
Arrintaa naxdinta leh waxaa la sheegay inuu fekerkiisa lahaa nin magaciisa lagu sheegay Dr. Cali Al-shibil oo wax ka dhiga Jaamacadda Al-imaam Muxamed Bun Sucuud ee dalka Sacuudi Carabiya, wuxuuna ninkaas oo u shaqeeyaa dowladda ku taliyey in qabriga Rasuulka Sallallaahu Caleyhi Wasallama laga bixiyo Xaramaka Masjidka Shariifka ah, lana geeyo meel aan la ogeyn oo ka mid ah Qabuuraha Baqiic oo asxaab badan kuu aasan yihiin.
Wargeysyada Ingiriiska ka hor waxaa warbixinta ninkaas diyaariyey ee daraasadda lagu sheegay lagu baahiyey Majalad lagu magacaabo (المجلة العلمية المحكمة), taasoo ay soo saarto Xarrunta Cilmi Baarista iyo soo nooleynta Raadadka Islaamka ee taabacsan Golaha Sare ee mamula arrimaha Masjidul-xaraamka iyo Masjidka Nabiga Sallallaahu Caleyhi Wasallama.
Daraasad ku sheegan foosha xun oo ka koobneyd 61 bog, islamarkaana la sameeyey 4 bilood ka hor, waxaa sidoo kale lagu sheegay in la dumiyo darbiga Masjidka Nabiga ee loo yaqaano (Aljidaar Al-cuthmaani), inaan dib loo soo celin medbaka cagaaran ee qubadda Masjidka iyo la tirtiro Ashcaar iyo qasiidooyin amaan ah oo halkaas ku yaalla.
Sida lagu sheegay daraasad ku sheega Sacuudiga, sababta waxaan oo dhan loo sameynayo ayaa ah in laga hortago waxa loogu yeeray shirki iyo in lagu tawasulo ama la gargaar weydiisto Nabigeennada Muxamed ah Sallallaahu Caleyhi Wasallama!!!.
Wargeyska The Indepedent ee kazoo baxa Britain ayaa qoray in raga Wahaabiyada ah ee dalka Sacuudigu rumeysan yihiin in booqashada qabriga Nabigu tahay Shirki, ayna doonayaan iney arrintaas meesha ka saaraan, sida kaliya ee ay dadka uga reebi karaan booqashada qabriga Nabigana ay tahay iney meesha ka bixiyaa, waa sida ay aamineene.
Dalka Sacuudigu wuu ka hadlay arrintaan, wuxuuna ku gaabsaday iney tahay “Daraasad shakhsi sameeyey oo kaliya, aysanna arrintu aheyn go’aan xukuumadeed”, sidaas waxaa yiri ninka lagu magacaabo Axmed Bin Muxamed Al-mansuuri oo ah afhayeenka Golaha maamula arrimaha Masjidul-xaraamka iyo Masjidka Nabiga Sallallaahu Caleyhi Wasallama.
Waxaa wax lala yaabo ah inaan dunida Muslimka laga maqlin dhawaq xoog leh oo looga horjeedo hamiga cusub ee ah in Nabid Muxamed Sallallaahu Caleyhi Wasallama laga soo faago qabirigiisa, iyadoo la diidan yahay in dadka Muslimiinta ah ee ku nool Sacuudiga ama kuwa xajka u tago ay soo siyaartaan.
Ma aha arrin cusub in la isku dayo in lagu xadgudbo qabriga Nabigeenna Sallallaahu Caleyhi Wasallama, hadaba Imisa jeer ayaa la isku dayey arrintaas?.
Afar jeer oo la isku dayey in la faago qabriga Rasuulka!!
1- Isku daygii 1-aad wuxuu dhacay qiyaastii 400 sano kadib Hirjradii Nabiga Sallallaahu Caleyhi Wasallama, waxaana isku dayey Xaakiim reer Msar ahaa oo la oran jiray Mansuur Bin Nazaar Bin Macad. Ninkaan ayaa ahaa nin lumay oo xumaano badan oo aan lasoo koobi Karin sameeyey.
Ninkaas waxaa qaar ka mid dadkii ku dhawaa kula taliyeen inuu Madiina kazoo raro qabriga Nabiga, islamarkaana geeyo dalka Masar, si markaas Muslimiinta aduunka oo dhan Masar u aadaan, arrintaasna wey la fiicnaatay Mansuur Bin Nazaar.
Wuxuu diyaariyey dhaqaale xoog leh, wuxuuna magaalada Madiina u diray ciidan uu hogaaminayey nin la oran jiray Abal-fatuux si ay usoo faagaan Qabriga Nabiga una geeyaan dalka Masar.
Markii ciidamadii uu watay Abal-fatuux gaareen hareeraha Madiina ayaa waxaa ka horyimid dadkii magaalada, kuwaasoo go’aansaday iney la dagaallamaan, waxaan Abal-fatuux iyo ciidamadiisii ku sigeteen in la laayo.
Abal-fatuux ayaa markaas kadib go’aansaday inuu arrintaas ka laabto, hase ahaatee markii qoraxdu dhacday ayaa waxaa Alle ku kiciyey dabeyl, waxaana kala yaacay fardihii iyo geelii ay wateen, sidaas ayayna ku fashilantay kooxdii dooneysay iney la baxdo Nabiga ee laga soo diray Masar.
2- Isku dayga 2-aad waxaa sidoo kale sameeyey Xaakimkan reer Masar ahaa ee Mansuur Bin Nazaar Bin Macad, markaan dambe wuxuu diray dad si qarsoodi ah uga soo bixiya Nabiga Nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee.
Kooxdii uu diray ayaa degay guri deris la ah qabriga Rasuulka Sallallaahu Caleyhi Wasallama, waxeyna bilaabeen iney dhulka hoostiisa qodaan si ay ula baxaan, hase ahaatee waxaa ka horyimid nuur, waxaana dadka Madiina maqleen qeylo dhaan leh “Nabigiina ayaa la faagay”.
Reer Madiina ayaa isku soo baxay waxey sameeyeen baaritaan, waxeyna heleen kooxdii godka qodeysay, halkaas ayayna ku laayeen.
3- Isku dayga 3-aad wuxuu dhacay sanadkii 557 ee Hijriyada, xilligaasoo uu joogay Suldaan Caadil ahaa oo la oran jiray Nuuradiin Zanki.
Suldaankan ayaa 3 jeer ru’yo ku arkay Nabiga Sallallaahi Caleyhi Wasallama, oo ku leh “Iga badbaadi labadaan nin”. Markaas ayaa suldanku huradadii ka toosay, wuxuuna wacay nin wanaagsanaa oo wasiirkiisa ahaa, lana oran jiray Jamaaludiin Al-musili.
Ru’yadii uu 3-da jeer arkay ayuu uga sheegeeyey, markaas ayaa Jamaamuldiin Al-muusili yiri “Fadhi kuuma yaalo ee aad magaalada Madiina Al-munawara, hana ka sheekeyn arrinta aad aragtay”, Suldaan Nuuradiin Zanki iyo wasiir Jamaaludiin ayaa isu raacay Madiina.
Markii ay tageen Madiina ayaa iyadoo masjidka ay dad badani joogaan waxaa wasiir Jamaaludiin yiri “Suldaanku wuxuu u yimid Madiina inuu soo siyaarto Nabiga Sallallaahu Caleyhi Wasallama, wuxuuna wada sadaqo ee soo qora dadka u baahan”.
Waxey rabeen iney dadka ka dhex eegaan labadii nin ee lahaa tilmaamihii Nabi Muxamed Sallallaahu Caleyhi Wasallama uu Suldaan Nuuradiin Zanki ru’yada ugu sheegay.
Dhamaan dadkii sadaqada qaadanaya ayay wajiyadooda eegayeen, dadkii sadaqada la siinayey ayaa dhamaaday, mana lagu arkin qof leh tilmaamihii la raadinayey, markaas ayaa reer Madiina la weydiiyey dad kale miyaa harsan?, waxey ku jawaabeen ‘Maya’, markaas ayaa Sulaanka iyo wasiirkiisu ku yiraahdeen “Bal fekera oo fiirsada”,.
Reer Madiina waxey yiraahdeen “Ma jirto cid kale oo hartay oo aan aheyn labo nin oo reer Marooko ah, kuwaasoo aan waxba cid ka qaadan, islamarkaana dadka xajinaya sadaqo siiya”.
Markaas ayaa Nuuradiin Zanki wuxuu yiri labadaas nin hala ii keeno, markii loo keenay ayuu weydiiyey xagee ka timaadeen?, waxey ku jawaabeen “Marooko ayaan ka nimid, waxaan u nimid xaj, waxaana kadib dooranay inaan deris la noqono goobtaan barakeysan ee uu ku yaallo qabriga Nabiga”.
Nuuradiin Zanki ayaa ku yiri “Runta ii sheega”, waxey ku adkeysteen warkoodii hore, wuxuuna ku yiri “I tusa gurigiina”, waxey geeyeen gurigooda oo ku dhow qabriga Nabiga, wuxuu suldaaku ku wareegay guriga, wuxuuna meel ka qaaday gogol taallay, markaas ayuu arkay god loo qoday jihada qabriga Nabiga, arrintaas ayaan dadkii la argagxeen.
Suldaan Nuuradiin Zanki ayaa markaas nimankii weydiiyey ”Runta ii sheega” kadib markii la garaacay, waxeyna sheegeen iney yihiin Kiristaan, uuna soo diray nin gaal ah, kaasoo lacago badan ku siiyey sidii ay u xadi lahaayeen jasadka Nabiga Sallallaahu Caleyhi Wasalllama.
Labadan nin ee nasaaradaha oo markii ay tegayaan Madiina soo raacay dadka kazoo xajiray galbeedka Carabta ayaa dadka Madiina ku arji jireen cibaado badan oo isugu jirta salaad iyo sadaqo, hase ahaatee dan kale ayay ka lahaayeen, waxaana Suldaan Nuuradiin Zanki amaray in labadooda qoorta lagu dhufto.
4- Isku dayga 4-aad ayaa dhacay waqtigii Amiir Salaaxudiin Al-ayuubi, waxaana suldaan Kiristan ahaa oo la oran jiray Arnad uu heshiis kula galay qaar ka mid ah dadkii deganaa gobolka Siinaa ee dalka Masar inuu magaalada Madiina ka gala dhanka magaalada Cidaab, si uu ula soo baxo jasadka barakeysan ee Nabi Muxamed.
Markaas Salaaxudiin Al-ayuubi oo ku sugaan Maka ayaa arrinta maqlay, wuxuuna aaday halkii uu kazoo socday Arnad, halkaas ayuuna ku dilay, sida uu weriyey dhulmareenka Ibunu Jubeyr Abul-xuseyn. Wuxuuna qisadan ku qoray Socdaalkiisii 578 Hijriya.
Ciidamadan Kiristanka ah oo intii ay u sii socdeen Madiina dilay dad badan, islamarkaana boobay hantai badan ayaa la jebiyey iyagoo ku dhow Madiin oo uu uga dhinaa hal maalin socod, waxaana jebintood qey ka qaatay ciidamo ka yimid Masar.
Intaas oo isku day fashil ayay ku dhmaadeen, Alle ayaana Nabiga Sallallahu Caleyhi Wasallama dadka ka ilaalinaya, ee waxaa la gudboon qolada qorshahaan waddo iney Alle u laabtaan.
W:D: Abdullahi Hassan
Autralia oo Soomaaliya siineysa $5 Milyan dollar
Bulgaria: Nin Turki ah oo lagu qabtay baasaboor dublamaasi oo Soomaali ah